Samsung Galaxy A02s waa la sifeeyey: kuwani waa astaamahiisa | Androidsis
Soo saaraha Kuuriya ayaa ka firfircoon sidii hore. Si tartiib tartiib ah ayey u cusbooneysiineysaa buugyaraha oo dhan. Haddana waa markiisa Samsung Galaxy A02s, batari heer-gal ah oo fadeexad ah.
Maaha markii ugu horeysay ee aan maqalno wararka xanta ah ee la xiriira terminaalkan, laakiin hadda wuxuu kusii fiday Geekbenck iyo FCC, isagoo xaqiijinaya inta badan astaamaha farsamada ee Samsung Galaxy A02s.
Samsung Galaxy A02s ayaa noqon doonta taleefanka ugu raqiisan
Shahaadada Samsung Galaxy A02s kadib waxaan xaqiijin karnaa inta badan astaamaheeda. Iyada oo leh magaca lambarka 'SM-A025F / DS', kani waa terminaal yeelan doona caymiska LTE iyo Anroid 10 oo ah nidaamka qalliinka. Intaas waxaa sii dheer, warqaddaas "s" ee ku taal magaca terminal-ka waxay caddeynaysaa inay noqon doonto nooc ka sii fiitamiin badan marka loo eego A02.
Sidan oo kale, waxaan ku helnaa processor Qualcomm 8-core Snapdragon, hubaal Snapdragon 625 ama 450, oo ay la socdaan 3 GB oo RAM iyo Adreno 506 GPU ah. Qaabeynta in ka badan oo ku filan si ay u awoodaan inay ka dhex baxaan internetka, isticmaal shabakadaha bulshada iyo xitaa inay ku raaxaystaan ​​ciyaarta qariibka ah ee aan u baahnayn xamuul sawir leh.
Waxaan sidoo kale awoodnay inaan ogaano batariga uu terminal-kan kori doono. Oo waxaan horay u rajeyneynaa taas madax-bannaanida Samsung Galaxy A02s waxay noqon doontaa mid ka mid ah jibbaarayaasheeda waaweyn. Sababtoo ah waxaan la kulannaa taleefan kor u qaadi doona xalka 5.000 mAh, taas oo caddeynaysa inay bixin doonto dhowr saacadood oo shaashad ah.
Inta soo hartay, xilligan ma hayno macluumaad ku saabsan awoodda keydinta iyo qaybta sawir qaadista ee xaruntan. Laakiin adoo tixgelinaya in Samsung Galaxy A02s hubaal uu noqon doono taleefanka ugu raqiisan Samsung ee aad iibsan karto, ha ka faanin faan weyn. Taariikhda ay soo saarayso iyo qiimaheeda? Waxay ku imaan kartaa toddobaadyada soo socda qiimo aan ka badnaan doonin 100 - 150 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung Galaxy A02s waxay lahaan doontaa batariyada fadeexada
Ciyaaraha ugu fiican ee Android ee lagu raaxeysto Halloween this 2020